दुई पत्रकार महिलासहित पाँच पुरस्कृत - Nari Post
You are at :Home»नारी पोष्ट»दुई पत्रकार महिलासहित पाँच पुरस्कृत
दोलखामा दुई पत्रकार महिलासहित विभिन्न पुरस्कारबाट पाँच जना पुरस्कृत भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाले स्थापना गरेको इन्द्रमणी पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकार सर्मिला बुढाथोकी पुरस्कृत भएकी छिन् । समाजसेवी माधवमणी राजभण्डारीले आफ्नो स्वर्गिय पिताको नाममा अक्षयकोषको स्थापना गरेका हुन् । यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले मेहेरमान फाउण्डेशन मार्फत आफ्नो आमा स्व. हेमन्तकुमारी प्रधानको स्मृतिमा स्थापना गरेको ‘हेमन्तकुमारी महिला सम्मान राष्ट्रिय पुरस्कार २०७४’बाट पत्रकार एलिजा उप्रेतीलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।
त्यसैगरी ‘इन्द्रमणी पत्रकारिता पुरस्कार २०७४’ बाट पत्रकार बाबुराम शर्मालाई पुरस्कृत गरिएको छ । यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाले जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको सहयोगमा स्थापना गरेको ‘विकास पत्रकारिता पुरस्कार २०७४’ बाट पत्रकार राजेन्द्र मानन्धर र प्रदेश सदस्य पशुपति चौलागाईंको सहयोगमा स्थापना गरेको ‘गणतान्त्रिक पत्रकारिता पुरस्कार २०७४’ बाट पत्रकार शम्भु गौतमलाई पुरस्कृत गरिएको छ । सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ तीन नम्बर प्रदेश सदस्यमा निर्वा्चित नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाका सदस्य रविन्द्र गौतम र जानुका अधिकारीलाई सम्मान समेत गरिएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाका अध्यक्ष जीवन लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न पुरस्कार वितरण तथा सम्मान कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डे, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय महासचिव ओम शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य चिरञ्जीवी मास्के, पुरस्कृत पत्रकार शम्भु गौतम र नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाका सचिव विनिता शिवाकोटी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । महिला खबर
विवाह गर्न अब २० वर्ष उमेर पुग्नै पर्ने !
naripost 13 Feb 2019
‘महिनावारीबारे खुलेर कुरा गरौं’
गुरुङ ब्यूटी पार्लरले दिदीबहिनीलाई दर खुवायो